Enterprise Sumo - Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.
SeSino-yekune dzimwe nyika sci-tech yekubatana kambani muChina inoshanda muR&D, kugadzirwa uye kugovera algae hydrocolloids, Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd., yakavambwa muna1990 nefarari yakakura yeagar uye carrageenan yakatarisana neyekumba neyekunze. misika.
Nekutora masawi egungwa kubva kuIndonesia neChina sezvinhu zvakasvibirira, Fujian Global Ocean inovimba nehunyanzvi hwekugadzirisa tekinoroji uye hunyanzvi hwekuvandudza michina kugadzira zvigadzirwa zvese zvine mhando yepamusoro; zvigadzirwa zvedu zvikuru nderekudya giredhi agar, bacteriological agar, pakarepo soluble agar, carrageenan, agaro-oligosaccharide uye yavo michina zvigadzirwa, iyo yegore rose yekugona kugona inogona kusvika kumatoni mazana matatu. Zvigadzirwa zvedu zvakabvumidzwa neIO, HALAL uye KOSHER, zvakare zvinokwanisa kusangana neChina yenyika zviyero uye EU zviyero, uye zvakatengeswa muChina zvese uye zvakatumirwa kuSoutheast Asia, European uye American matunhu, nezvimwe.
Seiyi kiyi kune yegungwa biotechnology yekuratidzira bhizinesi muChina, Fujian Global Ocean yaitisa nekusimbisa kubatana kukuru uye kwakadzama uye kuchinjana nenzvimbo huru yesainzi yekutsvagisa nemasangano edzidzo yepamusoro kumba nekune dzimwe nyika; kugadzirwa kwayo kwehunyanzvi uye musika wepasi rese unosiya kambani ichikunda kurumbidza kwevatengi uye kugona kugara uchiziva.
Nekutevera yemagariro pfungwa yekutarisira, kuramba uchiwana kugona uye kubudirira, uye kudzingirira hwakanakisa uye hwakakwana basa, Fujian Global Ocean yakazvipira kupa vatengi kumba nekune dzimwe nyika dzakachengeteka, hutano uye zvakatipoteredza nhevedzano zvigadzirwa nemasevhisi.